"value units" मा स्क्रोलपट्टी थम्बको साइज वर्णन गर्दछ।उदाहरणका लागि,("Scroll value max." minus "Scroll value min.") /2को एउटा मान स्क्रोलपट्टी थम्बमा परिणामित हुन्छ त्यसले स्क्रोलपट्टीको आधा भाग ओगट्दछ।
स्क्रोलपट्टीको चौडाइ स्क्रोलपट्टीको उचाइ सँग बराबर बनाउनका लागि,दृश्यात्मक साइजलाई शून्यमा सेट गर्नुहोस।
एउटा Calc स्प्रेडसिटमा,एउटा स्क्रोलपट्टी र एउटा कक्ष विचमा दुई-बाटो लिङ्क सिर्जना गर्नका लागि डेटा ट्याव प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ।
यदि तपाईँंले "Dropdown" गुण मिति फाँटमा मानाङ्कन गर्नुभयो भने,प्रयोगकर्ताले मिति फाँट तल एउटा मिति चयन गर्नका लागि पात्रो खोल्न सक्दछ। यो एउटा तालिका नियन्त्रण फाँट भित्र एउटा मिति फाँटमा पनि लागू हुन सक्दछ।
दृश्यात्मक समूह बिभिन्न नियन्त्रणहरूलाई फ्रेम सिर्जना गर्दछ। समूह बाकसले तपाईँंलाई एउटा फ्रेममा विकल्प बटनहरूलाई समूहबद्ध गर्न दिन्छ।
यदि तपाईँले कागजातमा समूह फ्रेम घुसाउनु भएमा, समूह तत्व विजार्ड सुरु हुन्छ, जसले तपाईँलाई एउटा विकल्प समूह सजिलै सँग सिर्जना गर्न अनुमति दिन्छ ।
द्रष्टव्य: जब तपाईँंले पहिले नै अवस्थित नियन्त्रणहरू माथि समूह बाकस तान्नुहुन्छ र त्यसपछि एउटा नियन्त्रण चयन गर्न चाहनुहुन्छ,तपाईँंले पहिले समूह बाकसको प्रसङ्ग मेनु खोल्नु पर्दछ र मिलाउनुहोस - पछाडि पठाउँनुहोस रोज्नु पर्दछ। त्यसपछि आदेश Ctrl थिचेको बेलामा नियन्त्रण चयन गर्नुहोस।
समूह बाकसहरू दृश्यात्मक प्रभावका लागि मात्र प्रयोग हुन्छन। विकल्प फाँटहरूको कार्यगत सामूहिकरण,नाम परिभाषाबाट बनाउन सकिन्छ।सबै फाँटहरूकोName गुण अन्तर्गत,तिनीहरूलाई समूहबद्ध गर्नका लागि उस्तै नाम प्रविष्टि गर्नुहोस।
डाटाबेस तालिका प्रर्दशन गर्न तालिका नियन्त्रण सिर्जना गर्दछ । यदि तपाईँले नयाँ तालिका नियन्त्रण सिर्जना गर्नुहुन्छ भने, तालिका तत्व विजार्ड देखापर्दछ ।
एउटा नेभिगेसन पट्टी सिर्जना गर्दछ।
नेभिगेसन पट्टीले तपाईँंलाई एउटा डाटाबेस वा डाटाबेस फारमकबाट सार्न दिन्छ। नेभिगेसनमा भएको पट्टीले नियन्त्रणहरूमा पूर्वनिर्धारितnavigation bar in LibreOffice ले जस्तै कार्य गर्दछ।